कोरोना संक्रमणबाट थप दुई जनाको मृत्यु , बझाङमा मृत्यु हुनेको संख्या ८ पुग्यो - Khaptad Aawaz
२० बैशाख २०७८, सोमबार १२:३४ 274 पटक हेरिएको
बझाङ । बझाङमा थप दुई जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा जयपृथ्वी नगरपालिका वडा ३ की ५५ वर्षिया महिला र तल्कोट १ की ४० बािषर््ाया महिला रहेकी छन् । जिल्लामा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ८ पुगेको छ ।
जिल्ला अस्पताल बझाङको कोरोना वार्डमा उपचारको क्रममा रहेकी जयपृथ्बी नगरपालिका ३ की महिला सात दिन देखी विरामी रहेकी महिला आइतबार मात्र जिल्ला अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन् । जिल्ला अस्पतालमा भर्ना भएपछि उहाँमा कोरोना पोजेटिभ थियो । कोरोना संक्रमण पुष्टी भएपछी जिल्ला अस्पतालमा भर्ना भएकी उहाँको आइतबार राती ११ बजे ज्यान गएको स्वास्थ्य कार्यालय बझाङका कोरोना सम्पर्क ब्यक्ती नारायण प्रसाद जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
तल्कोट १ घर भएकी महिलाको कोरोना संक्रमण पुष्टी भएपछि घर जाने क्रममा वीच बाटोमा नै उहाँको आइतबार राती १२ वजे ज्यान गएको बताईएको छ । जिल्ला अस्पतालमा १८ गते कोरोना जाँच गराउदाँ रिपोर्ट पोजेटिभ आएको र १९ गते उहाँ तल्कोट गाँउपालिका वडा नं. १ स्थित घर जानलाई सदरकमुकाम चैनपुरबाट हिडेकी थिइन् । साँझ घर जाने क्रममा अवेर भएपछि आफन्तको घरमा बसेको र राती १२ बजे उनको मृत्यु भएको आफन्तले जनाएका छन् ।कोरोना पोजेटिभ भएपछि होम आइसोलेसनमा बस्ने भन्दै उहाँ अस्पतालबाट निस्किएकी थिइन् । घर नआएर आइसोलेसनमा बस्नु भनेर भनेको भएपनी गाढी बुक गरेर घर आएको तल्कोट गाँउपालिका वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष गोपाल धामीले बताउनुभयो ।
जिल्लामा आइतबार सम्म कोरोना संक्रमणबाट नै ज्यान गुमाउनेको संख्या हिलो चरणमा ३ जना र दोस्रो चरणमा ५ जना गरि ८ पुगेको छ भने कोरोना संक्रमित हुनेहरुको संख्या २०४ पुगेको छ । कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछी जिल्लामा सोमबार विहान १ वजेदेखी निषेधाज्ञा लगाइएको छ । निषेधाज्ञाको पुर्ण पालना गर्दै सुरक्षित रहन सवैमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला अस्पताल बझाङले अनुरोध समेत गरेको छ ।